Haxxummaan Shira Xaxuu Abbaas Haxa’ee Balleessuu Danda’a! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooHaxxummaan Shira Xaxuu Abbaas Haxa’ee Balleessuu Danda’a!
Damee Boruu tin: Sadaasa 12, 2018
Namni tokko amma balleessaa isaaf seeraan murtii irratti jiguu itti seeraan qulqluu dha. Haala qabsoo uummata Oromoo ilaalu keessatti drama deemaa jiru akka hubannaa ofii itti ibsachuun dirqamaa fi mirga lamumaa (citizenship) ofii ti. Haala kana sonaan hubatee murteefachuun immoo dirqama fi itti gaafatama tokko tokkoo dhalaa Oromoo fi Uummata bal’aa Oromoo akka tahe ifa jira. An waan natti fakkaate diriirsee lafa kaa’uun yaala. Dhugaan kun gaaf tokko ni baha. Garuu gaafa dhugaan kun bahuu nu jiraannee inni agarru. Dhugaa jiru seenaa fi warra seenaa qorataniif dhiifnee haala jiru adda baafnee ilaallu haa yaalu.
Bara ABO diigama isa duraa dandamatee of ijaaree tarkaafachuuf miila butachaa eegalaa shirri waraana caalu keessa seenee diiguuf irratti qophaa’e. Humni hundee isaa diina keessaa dhufu kun harka diinaan gurmaa’ee fi qindaa’ee akka dhufaa dagachuun hooggantota ABO f dadhabbii tahuu mul’isa. Humna waraanaa EPRDF keessa Jeneraalotaa fi olaantota ajaja waraana dhalootan Oromoo 300 ol tahan fudhatee hulluuqee bara 2006 Eritrea seena ergaa (mission) qaba. Dirree waraanaa gama gamanaan wal xiichaa jiru bakka hantunni iyyuu sokoksuu hin dandeenye (highly militarized zone), damaamtiin(land mine) taakuu taakuun owwaalamee jiru keessaa gufuu fi gufaatii malee qaxxamuruuf baasaasni olaanaan (Spy Master of EPRDF) yoo ergaaf (mission) dabarsame malee darbuu danda’uun hafee waan yaadamu iyyuu hin tahu. Basaan Eritrea illee shira kana keessa harka qabachuu ni danda’a jedhanii warri yaadan jiru.
Waraanni humna amma kana qabu: i) mootummaa galagalchee aangoo qabachuu utuu danda’u: ii) naannoo Oromiyaa barbaade tokko utuu bilisa baasee dhuunfachuu humna gahaa qabuu: ii) meeshaa waraanaa qabu lafa kaa’ee gammoojii Eritreaa keessa maal argachuuf deeme? Kan ifa mul’at ABO adamsanii akka lafa irraa balleesaniif ergaa deemaa jiraachuu isaanii ti. Ajajaan waraana hundi ABO adamsuuf akka deeman ni beeku jechuun gowwumaa dha. Ergaa kana fudhatee kan deemaa jiru madhee muraasa Mootummaan EPRDF ammantaa irraa qabu duwwaa dha. Irra guddaan akkuma yaada isaanii uummata Oromoof qabsoo gochuuf deemaa jiraachuu isaanii qofa qofa beeka. Haalli kana fakkaata waraana keessatti tooftaa beekamaa dha. Warri wal lolan lamaan ergamtoota(Moles) dhoksaan wal keessan qabaachuun haaraa miti. Ijaarsichuma dhuunfachuuf yaaluun garuu waan haaraa fakkaata.
OPDOn hojii manaa ishee siriitti hojjetee jirti. Duraan dabrsitee dabbaloota leenjiftee ABO keessaa naqachaa turte. Warri kun illee amma sadarkaa hoogganaa ABO itti yaroo ol bahaa jiran gurmuu waraanaa kana wajjin wal simatan. Utuu oolee hin bullee waraanni EPRDF irraa dhufe hoogganummaa ajajaa WBO dhuunfate. Hooggana ABO gara dirree Kibbaa walii gahiif geessanii fixxuuf yaalame ture itti dammaqamee akka fashale oduun jira.
WBO yaroo dhuunfatan nuyi biyya isin galshinee isin loshiifna. Warri ABO kun ofumaa biyya kana keessa akka teessan malee biyya keessaniif akka loltan hin barbaadan kan jedhu olola ofaa turan. WBO keessa ILLEE warri dhugaa itti fakkaate jiraachuun ni mala. Yaroo gabaabaa keessatti WBO keessa saba boontota sodomaa ol akka ajjeessan Kora Sabaa ABO darbee irratti maqaan warra du’ee akka ka’e ragaan ni jira jedhama. Loltu amma kana bakka waraanni hin jirre biyya Ormaa keessatti ajjeessuun maaliif barbaachisaa tahe? Hojiin isaanii kun ergaa isaanii ifa gochaa jira.
WBOn godinaa Kibaa kan Luchoo Bukuraan geggeessamuu waraana Bilisummaa Oromoo B.J. Kamaal Galchuun hooggannamu jedhee karaa gaazexxenyota Keeniyaan beekumsaa balaa erga argatee booda hidhannaa guutuu wajjin akka mootummaa EPRDF itti harka laatu godhame. Ilmaan Oromoo hidhannaa kana dhiiga isaaniin hidhatan. Meeshaan dhiiga ilmaan Oromoon argame maaliif akka uummata Oromoo ajjeessuuf diinatti deebi’ee gala? Walii gala mooraa qabsoo bilisuummaa Uummata Oromoo haamilee cabsee akka diinatti harka laatuu gochuuf ture.
Bara kana keessa Jawaar kan hubate qaba. ABO akka fayyuu hin dandeenyetti rukkutamee jira jedhee barreessuun isaa dhugaa irraa fagoo miti. Shira OPDOn dhalgaa jirrtu illee amma irraa beeku qaba. ABO irratti hameenya amma kana hin jedhamne haa dalagamu malee ABOn ijaarsa tasa baduu danda’u miti. Ijaarsa kaayyoo fi akeeka qaqqallii fi qaroon ilmaan Oromo dhiiga isaanii itti lolaasanii fi lafee isaanii itti caccabsanii boola tokko keessatti owwalamaniin waan handhurmeef shiraan baduu irraa fagoo jira. Qabsawwaan yoo kufu, qabsoon caalaatti finaa bula.
“ABO hin jiru”. “WBO bakka itti lolaa jiru tokko iyyuu hin qabu” jedhee warri olola jalqabee dabbaloota OPDO fi kittilayyota warra kana akka tahe ifaa dha. Afaanfajjii fi dogongoraa saba Oromoo keessatti uummanii qabsoon uummata Oromoo akka gatatuu fi laamsha’u gochuun hojii isaanii itti aanu tahe argame.
Akka hawwan sana humnaan ABO cabsuu fi balleessuu yaro dadhabban ilmaan Oromoo lagan, gandaa fi ammantii gargarbaasuu fi akka namni hundi wal shakku gochuudhaan Oromoo biyya alaa keessa jiru haala takkaa argamee hin beekneen gargar qoodan. Yaroof humna qabsoo Uummata Oromoo dadhabsiisuuf ayyaana argatanii turan. ABO dhabaa dha jedhanii ega keessaa bahanii , waa’ee lolaa immoo kan beeku isaan erga tahee maaliif dhaaba sadii ijaaruun isaan Barbaachise? B. J. Kamaal Galchuu Kalachumaa ABO, B.J. Hailu Gonfaa Tokkichumaa ABO Kolonel Garsuun Dhaaba Uummata Itoopiyaa kan ijaaratan yookan kan mogaafatan kampii qabsoo bilisummaa diiguu fi laamsheesuuf akka tahe ifa jira.
Biyya lafaa kana irratti ajajaa waraanaa miti loltuun tokko iyyuu diinaaf yoo harka kenne badii biyya ganuun (treason) mana seera waraanatti dhiyyachuun (Marshal Court) dirqama. Warri kun Mootummaa fi waraana EPRDF ganaanii deemuu isaanii caalaa yaroo itti Ertirea Itoophiyaan kokkee wal qabaa turan keessa waan tahee badii guddaa (treason) biyya Itoophiyaa jedhamtu irratti hojjetanii jiru. Waraanni isaan gananii deeman waraana EPRDF. ABO caala gaaf sana diinni EPRDF mootummaa Eritrea akka ture gaaffii hin qabu. Warri kun Mootummaa Eritrea wajjin tahanii Itoopiyaa lolaa turanii utuu itti hin gaafatamiin hafuun ergamtoota EPRDF akka tahan wal nama hin gaafachiisu.
Warrii kun Ergaa Hin Dhumne ( Mission Incomplete) waan qabaniif gara biyyaa deebi’anii aangoo OPDO olaanaa badhaasamuun ragaan dhiyeessaa jiru naaf mirkaneessa. Namni sadan Mootummaa OPDO keessa hojii olaanaa fudhatan kun diigaa ABO jalqaban sana akka xumura itti godhaniif akka tahe ifa jira. Har’a shira OPDOn xaxaaa jirutu kun ABO kan diigu utuu hin taane kan Uummata Oromoo garbummaa bara baraaf dabrsee qopheessaa jiru akka tahe barrechinee hubachuu qabna. Obbo Lammaa Magrsaa hundi keenya mana hidhaa keessa turee yaroo jedhu dhugaa isaa ti. Nuti garuu har’a illee mana hidhaa sana keessa jirra. Uummata Oromoof manni hidhaa koloneefataa Impayeera Itoophiyaa jala jiraachuu dha. Aaangoo wagaa tokkoo fi lamaa argachuun kan keessa baanuu utuu hin taane hundee gabrummaa Oromiyaa keessaa buqfinnee gaafa darbnu dha. Akkuma jecha isaa kanaan yoo tahe ilmaan Oromoo miseensa OPDO tahan isa waajin mana hidhaa keessatti qabsawwan kan turan utuu jiranii warra biyya gananii ala turanii dhufan kanaaf aangoo raabsuun maaliif barbaachisaa tahee argame? Akka hubannaa koo yoo tahe ABO dhiiguu irratti hammeenya isaan dhalaganiif OPDOn beenyaa baasaaf jirti. Akkuma OPDOn eenyuu aangoo akka caatii raabsaa akka jirtu tokko tokkoon haa hubannu. Daballoota ishee qabsoo uummata Oromoo dhaamsuuf bobbaafteef duwwaa akka ifatti argamaa jiru.
Namni yoo of sobee nama biraa illee waan sobuu danda’u itti fakkaata. Takka turee immoo sobaa jiraachuu isaa iyyuu ni dagata. Qabsoo waggaa arfan darban kana keessa tahaa ture adda durumaan kan ofee asiin gahe qeerroo fi qarree Oromoo ti. Dhiiga isaanii itti lolaasanii lafee isaanii itti caccbsanii asiin gahan. Warri qaama mootummaa taahnii dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasaa ture injifannoo uummata harkaa butachuuf agaamuun cubbuu of danda’e dha. Namni muraasni uummata keenya wajjin dhaabbanne yoo jedhan irraa bareeda. Injifannoon kan Uummata Oromoo ti. Uummatni Oromoo akkasi dammaqee lafaa ka’e yoo dhiiga ilmaan isaa deebi’e OPDO, ODP, EPRDF ykn Ginbot 7 soore namni gadduuf jira natti fakkaatu. Warra dhiiga isaa fi ilmaan isaa dhangalaasu of irraa kaasuuf humna gahaa qaba.
Akku dhugaa itti hin fakkaanne Uummata Oromoo dhugaa jiru hubachaa jira. Uummaata dammaqee jiru kana akkuma bara darban dorsisuu fi burjaajessuun qabsoo isa gara dabrsuuf warri wixxifachuu jiru yoo irra deebi’ee of ilaale bareedaa dha. Yaroo tokko tokko haaduun ormaaf qaran galagalee akka nama nyaachuu danda’us hubachuunis gamnumaa dha. Amma qabsoon kun galma isaa gahu Qeerroo fi Qarreen Oromoo WBO fi uummata isaanii cinaa dhaabbatanii akka Qabsoo Xumura Garbummaa rawwatan mamii hin qabu.
Shira Mootummaan Abiy Oromoo irratti karoorfate
Mootummaan Abiy hudhamee jira. Amma rakkoo hudhee qabe keessa bahuuf dhagaa mara garagalcha jira. Abbaa…